भद्रगाेल इपान र चुनावकाे अनिश्चितता - UrjaKhabar भद्रगाेल इपान र चुनावकाे अनिश्चितता - UrjaKhabar
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को निर्वाचन सर्ने निश्चित भएको छ । यता कार्यसमिति पदाधिकारीको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कारण इपान विस्तारै विवादको घेरामा तानिँदै गएको देखिन्छ ।
गत माघ २४ गते वार्षिक साधारणसभा गरी फागुन २३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरियो । तर, तोकिएको दिन आउनु ३ दिनअघिसम्म विधान संशोधन गरिएको छैन । नयाँ विद्यान आएपछि मात्र त्यही अनुसार पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने तय भएको थियो ।
नयाँ विद्यानमा अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष ३, महासचिव, सचिव ३, प्रदेश प्रतिनिधि समेत राखेर कार्यसमिति २३ पुर्याउने निर्णय भयो । तर, संशोधित विद्यान कहिले आउँछ ? त्यसको टुंगो छैन । संशोधनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरिएकाले त्यहाँबाट निर्णय भएपछि चुनावमा जान सकिने इपानको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका समस्या, गुनासा समेटर समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्ने र प्रवर्द्धकको हकहितमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले आज बाटो बिराएको देखिन्छ । यसलाई राजनीतिककरण गर्ने, राजनीतिक आस्थाको गुट बनाउने र त्यही अनुसार सेवा सुविधा पाउन सरकारसँग लबिङ गर्ने परिपाटी बस्दैछ ।
यही कारण एउटा समूहले लामो समयदेखि आफूलाई बाहिर पारिएको बताउँदै आएको छ । सरकारले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको भ्याट छुट, पोस्टेड पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) लगायत सुविधा दिलाउन इपानले सरकारसँग एक थोपो लबिङ नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेतृत्व तथा कमजोर कार्यसमिति हुनु वा सीमित गुटको प्रतिनिधित्व गर्नुले समस्या बढ्दै गएको धेरै प्रवद्र्धकहरूले खुला रूपमा आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । अझ रुग्ण भनिएका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग परामर्श नगरिदिएको भन्दै अर्का थरी रुष्ट छन् । यही समूह इपानको पुरानो कार्यशैली पल्टाउन लागिपरेको छ ।
संस्थाले बहुसंख्यक प्रवर्द्धकसँग समन्वय गर्न नसक्नु, अस्थिरता बढ्दै जानु र समयमा निर्वाचनसमेत गराउन नसक्नुले थप जटिलता निम्तिएको छ । अझ पदाधिकारीका केही व्यक्ति निर्वाचन नगरी कार्यकाल लम्ब्याउने योजनामा रहेको केही सदस्यको आरोप छ । यस्ता आरोप सत्य भए वा नभए पनि कार्यसमितिले समयमा चुनाव गराउन नसकेको पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।
यसो त स्थापनादेखि नै इपान भद्रगोल तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । ललितपुरमा संस्था दर्ता गरी सुरुमा खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको हिमाल पावर लिमिटेडमा कार्यालय राखिएको थियो । पछि कार्यालय काठमाडौं सारियो तर दर्ता ललितपुरमै रह्यो ।
दर्ता एउटा जिल्लामा र कार्यालय अर्कोमा हुँदा हरेक वर्ष नवीकरणमा समेत समस्या देखिँदै आएको पुराना सदस्यहरू सुनाउँछन् । दुई वर्षदेखि नवीकरण नगरेको संस्था केही दिनअघि मात्र सक्रिय बनाइएको छ । ढिला नवीकरण गर्नु तथा समयमा विद्यान संशोधनका लागि पहल नगर्दा निर्वाचन सरिँदैछ । इपानले छिटै सूचना निकालेर यसको जानकारी दिँदैछ ।
विद्यान संशोधन भएर आएपछि १५ दिनको सूचना निकालेरमात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मिल्छ । यसो हुँदा जति ढिलो नयाँ विधान आउँछ निर्वाचन पनि त्यति नै ढिलो हुने पक्का छ । जिल्ला प्रशासनले संशोधनमै एक महिना लगाइदियो भने निर्वाचन डेढ–दुई महिना धकेलिन्छ । यसले संस्था थप अस्थिर हुने, अनेक समूहको चलखेल बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
संस्था जति संगठित, एकताबद्ध र समन्वयकारी भयो त्यति नै निजी क्षेत्रको हकहित सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकारसँग लिनुपर्ने सुविधाका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्न बल पुग्छ । यसले समग्र विद्युत विकासलाई दिशा प्रदान गर्न सक्छ । हुन त संस्थामा आवद्ध नभई पनि दर्जनौं व्यक्तिले जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका छन् । यद्यपि, स्थापित संस्थालाई दरिलो बनाएर लैजाँदा स्वयं प्रवर्द्धक र विद्युत विकासमा सांगठनिक बल सञ्चय हुन सक्छ ।
भद्रगोल चुनावी दौड
झन्डै ३ महिना अघिदेखि इपान पदाधिकारी, सदस्य र बाहिर रहेका व्यक्तिलाई चुनाव लागिसकेको थियो । चुनावलाई लक्षित गर्दै एउटा समूह विधान संशोधनमा होमियो । यसक्रममा कार्यसमितिका पदाधिकारीमाथि विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप पनि लगाइयो । अब ढिलो चाँडो विधान संशोधन हुँदैछ । केही व्यक्ति तथा समूह अहिले चुनावको चटारोमा छन् ।
कार्यसमितिका पदाधिकारी सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा छ । जसअनुसार प्रवर्द्धक कृष्ण आचार्यलाई अध्यक्ष बनाउने लबिङ भयो/भइरहेको छ । तर, केही व्यक्ति उनलाई अध्यक्ष मान्न तयार छैनन् । केही प्रवर्द्धकहरू हालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे अध्यक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । तर, पाण्डे सुरुमै आचार्यलाई अध्यक्ष मान्ने कित्तामा उभिए ।
पाण्डेकै कारण संस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण खल्बलिएको केहीको धारणा छ । अहिले चुनामा होमिएका दुई समूह छ, एउटा सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चुन्ने र अर्को, निर्वाचनबाट । अझ चुनावमा होमिनेका दुई–तीन समूह देखिन्छन् । यस्तो परिस्थित सिर्जना भइरहँदा संस्था कसरी दरिलो बन्ला ?
पाण्डे चुनावी महोलबाट बाहिरिएपछि अध्यक्षका दाबेदार ३ जना देखिएका छन् । आचार्य, गणेश कार्की र रुग्ण आयोजनाका नेता सूर्यप्रसाद अधिकारीले आफूलाई अध्यक्षको दाबेदार घोषित गरिरहेका छन् । यद्यपि, आचार्यले सर्वसम्मत निर्णय भएमात्र आफूले नेतृत्व सम्हाल्ने बताइरहेका छन् । सर्वसम्मत मान्नेहरू आचार्यको कित्तामा उभिएको ठिकै मान्नुपर्छ । चुनाव हुनैपर्छ भन्ने अधिकारी र कार्कीसँग प्रस्ट मत देखिँदैन ।
कार्कीले आचार्य अध्यक्ष भएको खण्डमा आफू उपाध्यक्षमा बस्न तयार रहेको पनि सुनिएको हो । फेरि, कार्की र अधिकारी मिलेर चुनाव लड्ने तयारीमा थिए । तर, उनीहरू बीच नै सहमति टुटेको बुझिन्छ । यही कारण अधिकारी आफ्नो छुट्टै प्यानल घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । अब कार्की र अधिकारी मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ । यसले संस्थामा नेतृत्वको हानथाप, राजनीतिक रस्साकसी बढी र संस्थागत आचरणको विकास कम हुने सम्भावना छ ।
इपानलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने भन्दै कार्यसमिति ठूलो बनाइरहँदा यहाँभित्र राजनीति आस्थाको बीउ पनि रोपियो । विभिन्न आस्था राख्नेहरू भए पनि अहिलेसम्म इपानमा पार्टीगत राजनीति प्रवेश गरेको थिएन । अब त्यसलाई चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि, जिल्लादेखि प्रदेश तहका अनेक आस्थाका मान्छे जोडिँदैछन् ।
संस्थालाई बलियो बनाउँदै विद्युत विकासको दिशा निर्देश गर्नुपर्ने इपानले अब त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? सिंगो निजी क्षेत्रका विद्युत विकासकर्ताको नेतृत्व गर्दै सरकारको सारथी बन्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा इपानलाई सकारात्मक दृष्टिले नहेरेको अवस्थामा प्रवर्द्धकहरू अनेक कित्तामा बाँडिँदा भोलि उनीहरूको आवाज अझ कमजोर बन्दै जानेछ ।
कमजोर निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेप्ने, घोषणा गरेका सेवा–सुविधा नदिने र उसले उत्पादन गरेको विद्युत किन्न अनेक बाहना बनाउने आधार स्थापित हुनेछन् । अहिल्यै पनि विद्युत किन्ने टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) र टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानले प्रवर्द्धकहरू आजित भइसकेका छन् । इपान तथा प्रवद्र्धकहरू बाँडिँदै र आपसमा टाढिँदै जाँदा सरकारी दमन बढ्न सक्ने पक्ष टार्न सकिँदैन ।
२५–२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले ६ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । जबकि, सरकारले १०८ वर्षमा उत्पादन गरेको परिमाण त्यही हाराहारी छ । भोलिका दिनमा पनि सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतको परिमाण बढी हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रवद्र्धकहरू संगठित नहुने हो भने उनीहरूको अर्बौं लगानी शून्यमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।
जब लगानीकर्ताले आम्दानी गुमाउँदै जान्छन् तब वित्तीय संस्था हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर देखिन्छ । यसले विद्युत विकासको गतिमा बे्रक लगाइदिन्छ । अतः जोसुकैको जेसुकै राजनीतिक आस्था भए पनि इपानमा झन्डा बोकेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली बस्नु हुँदैन । सर्वसम्मत हुन खोज्ने वा बनाउन खोज्ने, चुनाव लड्ने जोसुकैले संस्थाको हित र सिंगो निजी क्षेत्रको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आवश्यक पर्दा सरकारसँग आँखा जुधाएर आफ्नो अधिकार र सुविधा लिन सक्ने हैसियत बनाउनुपर्छ । आज इपानका लागि बहुसंख्यक प्रवर्द्धकलाई नेतृत्व गर्दै असन्तृष्ट पक्षलाई समेत सँगै लिएर हिड्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । तबमात्र जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रले आफ्नो योगदान बलियोसँग स्थापित गर्न सक्छ ।